युवाशक्ति बिदेश पलायन मुलुकको समृद्धिमा असर - Desh Post
युवाशक्ति बिदेश पलायन मुलुकको समृद्धिमा असर
८ भाद्र २०७८, मंगलवार ०८:४९ मा प्रकाशित (3 हप्ता अघि) अनुमानित पढ्ने समय : १ मिनेट
“बिप्लवी तेन्जु योञ्जन”
देश पाेष्ट /काठमाण्डाैं । आफ्नो देशको माटोमा रहेर श्रम गरि आफ्नो पासिना बगाउने इच्छा कस्को हुदैन बिदेसि भुमिमा रहेर तातो घाममा १२ देखि १८ घन्टा निरन्तर खटेर श्रम गरि रगत पसिना सग पैसा साटिरहेका ७० लाख भन्दा बढी युवाहरुलो रहर हैन बाध्यता हो ।
आफ्नो मुलुकमा राजनीति खिचातानीको कारण मुलुकले असल सुसासन प्रदान गर्नु नसक्दा बेरोजगार युवाहरु आफ्नो रोजिरोटिको लागि साथै आफ्नो परिवार को सुनौलो भबिष्यको खोजी अनि आफ्नो छोरा छोरिको गुणस्तर शिक्षाको खतिर बैकल्पिक रोजगारको रुपमा बिदेश पलायन हुन पर्ने मुख्य कारण हो । देशमा स्वरोजगारको अबसर नहुदा बाध्यता भित्र जोखिम मोल्दै भए पनि वैदेशिक रोजगार रोज्न बाध्य छन युवाहरु ।
राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ ले तोकेको उमेर समूहलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा एक करोड छ लाख अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको ४० दशमलव ३ प्रतिशत युवा छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार यो १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहभित्रको सङ्ख्या हो । यो उमेर समूह मानव जीवनकै सबैभन्दा ऊर्जाशील र उत्पादनमूलक समूह हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको पाईन्छ । त्यसैले युवा जनशक्तिलाई देश विकास तथा समाज रूपान्तरणको मेरुदण्डका रूपमा सर्वत्र मानिन्छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउँदै गर्दा नेपाली समाजको विकास र रूपान्तरणमा यी युवा जनशक्तिको भूमिका कस्तो छ भनेर समीक्षा गरिनु जरुरी छ। मुलुकको जनसङ्ख्याको यति ठूलो हिस्सा ओगटेन सफल युवाहरु अहिलेको अबस्थामा कहाँ छन् र के गर्दैछन् भनेर लेखजोखा गर्ने समय आइपुगेको छ । मानव संसाधनको मुख्य स्रोत युवा वर्गलाई विभिन्न कालखण्डका सरकारले विकासको प्रवाहमा कसरी परिचालन गर्दै आएको छ, साथै आफ्नै मुलुकमा रोजगार प्राप्त हुन नसक्नुको मुख्य कारण के हो ? त्यसको खोजी गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
यी युवा जनशक्तिमध्ये वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार २० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका ३० लाखभन्दा बढी युवा विदेशिएका छन् । विदेशिएका सबै उमेर समूह गरेर करिब ४० लाख नेपाली विश्व श्रम बजारमा निम्नस्तरका काम गरिरहेका छन् । यीमध्ये करिब ९० प्रतिशत त मित्रराष्ट्र भारतलगायत खाडी मुलुकमा र दस प्रतिशत मात्र युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापान जाने गरेको तथ्याङ्क उल्लेख्य छ । मुलुकको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले देश विकासका लागि मानव पुँजीलाई अधिकतम महत्व दिनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, “हामीले आफ्नो श्रमशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ, हाम्रो पुँजी नै जनता हुन् । तर त्यसको बिपरित भैरहेको छ भन्दा फरक नहोला किन कि
मुलुकमा स्थिर राजनिती नहुदा स्वार्थि राजनीति खिचातानिको उपज भ्रष्टाचार , दलाल , कमिसन तन्त्र , नातावाद , कृपावाद , जस्ता कु तत्वको चाङ्गोल भित्र राज्य संचालित भएको हुदा युवाहरुलाई मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने रेमिटेन्स भित्र्याने साधनको रुपमा वैदेशिक रोजगारमा पठाई रहेछ । जहाँ , हरेक वर्ष हजारौँ नेपाली युवा नोकरीको खोजीमा भारत जान्छन् ।
हामी वस्तुको सट्टा युवाशक्ति निर्यात गर्छौं । मानव साधनलाई मुलुकको विकासमा प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ ।” सुरु सुरुमा हजारौँ युवा नोकरीका लागि भारत जाने गरेका थिए तर आज हजारौँमा होइन, लाखौँको सङ्ख्यामा हाम्रा श्रमशक्ति विश्व श्रमबजारमा संलग्न छन् । त्यसमा पनि युवा श्रमशक्ति । जुन मुलुकले चाहे जस्तो हामीले मानव साधनलाई नेपालको विकासमा प्रयोग गर्न सकिरहेको छैनौँ । यदि हाम्रो श्रमशक्तिले वस्तु उत्पादन गरेर विश्व बजारमा निर्यात गर्न सकेको भए नेपालको समृद्धि त्यहीँबाट सुरु हुन्थ्यो तर आज हामी वस्तुको सट्टा विश्व बजारमा युवाको श्रमशक्ति बेचिरहेका छौँ । तसर्थ यस अर्थमा भन्न सकिन्छ यसबाट समृद्धि होइन, परनिर्भरता वृद्धि भइरहेको छ ।
मुलुकको इतिहासले स्पष्ट पारिरहेछ रोजगारीका लागि विदेशिने परम्परा राणाकालदेखि नै सुरु भएको हो । राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको पालामा सन् १८८६ ताका नै नेपाली युवा ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएको इतिहास जिवित छदैछ । मुलुक परिवर्तनको खातिर पटक पटक कालखन्डमा विभिन्न खाले आन्दोलन नभएको हैन यस्ता केही उदाहरण २०४६ सालको परिवर्तनसम्म पनि विश्व श्रमबजारमा नेपाली श्रमिकको पहुँच कमै थियो । त्यसपछिको राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा बढ्दो विश्वव्यापीकरणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपाली युवाले सहज प्रवेश पाउन थाले । २०४६ सालपछिका सरकारले युवा श्रमशक्तिलाई देश विकासमा उपयोग गर्ने नीति निर्माण गर्नेतर्फ भन्दा पनि वैदेशिक रोजगार नीति बनाउनेतिर प्राथमिकता दिएको स्पस्ट छ।
अहिलेको यो अवस्थामा युवा जनशक्ति विदेशिनुको कारक तत्व खोज्न जरुरी छ । रोजगारीको अभाव, अवसरको खोजी, राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको अभाव, वैज्ञानिक शिक्षाको कमी जस्ता पक्ष आवरणमा त्यसको कारण हुनसक्छ । साथै त्यसको मुख्य कारण राज्यले अँगालेको अर्थ राजनीति र राज्य सत्तासँग जोडिएको हुन्छ । सन् १९५० मा नेपालमा प्रजातन्त्र आउँदै गर्दा त्यही बेला एसियाको उत्तरी क्षेत्रमा कोरियाली महाद्वीप टुक्रेर उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको नामको दुई देश स्थापना भएका थिए । त्यसबखत दक्षिण कोरिया र नेपालको आर्थिक अवस्था उस्तै–उस्तै थियो भन्ने विभिन्न दस्तावेजले पुष्टि गरेको छ। तर आज दक्षिण कोरियाको आर्थिक उन्नतिसगै बिकासको गति विश्व अर्थतन्त्रको एघारौँ स्थानमा पुगिसकेको छ । यसो हुनुका कारण देशले अँगालेको अर्थनीति नै हो । त्यसैले हाम्रो मुलुकको राज्य सन्चालनका ठेक्का लिएका ठेकेदार भनाउदा सासकहरुले देशलाई समृद्ध बनाउने सरल अर्थनीति अप्नाउनु जरुरी छ ।, जुन मुलुकको गरिब आम जनता गाउँमा बस्दछ, यसको गरिबी त्यहीँ छ, जबसम्म गरिब किसान मजदुरको समस्या बुझ्न सक्दैन, तबसम्म गाउँ र त्यसमा बसोबास गर्ने मानिसका बारेमा सचेत हुदैन । त्यसैले विकासको रणनीति बनाउँदा तीनवटा आधारलाई ध्यानमा राखेर बनाउनुपर्छ– गाउँमुखी, विकेन्द्रीकरण र श्रमप्रधान ।’’
जुन नीति गाउँलाई स्वावलम्बी बनाउने अर्थनीति हुनेछ । यदि गाउँ स्वावलम्बी भएमा त्यहाँका युवाका लागि त्यहीँ रोजगारी सिर्जना हुनेछ । हाम्रो देशमा, बढी जसो ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिमा आधारित हुने भएकोले हामी चाहन्छौँ साना उद्योगहरू, जहाँ बढी पुँजी चाहिँदैन र बढी मानिसलाई काम लगाउन सकिन्छ, त्यस्तो खालको कृषिमा आधारित श्रमप्रधान उद्योगहरू गाउँगाउँमा खोल्ने अर्थनीति तयार गर्नु जरुरी छ। यदि यस्ता खालको नीति भैदिएको भए आज हामी मानिसको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा औद्योगिक वस्तु निर्यात गरिरहेका हुन्थ्यौँ । हाम्रो मुलुकमा बिदेशी राष्ट्रले समेत यस्ता नीति लागू गर्न जमर्को नगरेको भने हैन यसको ज्वालन्त उदाहरण सन् १९४९ को क्रान्तिपश्चात् चीनले यस प्रकारको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई औद्योगीकरणमा जोड्ने अर्थनीति लिएको थियो तर नेपालमा बीपीको यस प्रकारको अर्थनीति कार्यान्वयन हुन दिइएन ।
त्यसपछिको पञ्चायती व्यवस्थाले त्यस प्रकारको उद्योग कलकारखाना बनाउने भन्दा पनि व्यवस्थालाई चिरस्थायी बनाउनेतर्फ राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग ग–यो । अमेरिका, भारत, चीनजस्ता मुलुकले ठूलो परिमाणमा आर्थिक सहयोग गरे पनि नेपालको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन सकेन । पञ्चायती सरकारले प्रशासन, सैन्य र अन्य राज्य संयन्त्रका शाखाहरूमार्फत विभिन्न तरिकाहरू अपनाएर व्यवस्थाविरोधी तìव मत्थर बनाउँथ्यो । सम्भवतः त्यस्ता तरिकामध्ये एउटा महìवपूर्ण पक्ष कर्मचारीतन्त्रको व्यापक वृद्धि रहेको थियो । (पी.ब्लाके, जे. क्यामरुन र डि. सेडन, ‘सङ्कटमा नेपाल’ १९८०) ।
उद्योग कलकारखाना स्थापना गरेर व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा पञ्चायती सरकारद्वारा व्यवस्था जोगाउन युवालाई सीआईडी र सुराकी बनाई अनुत्पादक क्षेत्रमा परिचालन गरियो । राज्यको अधिकांश बजेट यस्तैमा खर्च हुन्थ्यो । जसका कारण नेपाली समाज अशिक्षा र बेरोजगारको भुमरीमा फस्दै गयो । बहुदलीय व्यवस्थाको ३० वर्षमा पनि देश विकासको क्षेत्रमा युवा जनशक्तिको खासै भूमिका देखिएन । विदेशिएका युवाको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र भित्र्याउने साधनको रुपमा प्रयोग गरिनु दुर्भाग्य हो  । साथै स्वदेशमै रहेका युवा जनशक्तिको पनि सही सदुपयोग भएको नगरिनुले अर्को समस्या शृजना भएको छ । रोजगार नहुदा जागिरको लोभमा फसेर राजनीतिमा संलग्न एकाधबाहेक अधिकांश युवा विभिन्न राजनीतिक दलको झोले कार्यकर्ता बन्न बाध्य छन् । तर आम युवाहरु केवाल दलको निहित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि उनीहरूलाई परिचालन गरिएको छ । यति सम्मकी कुनै नेताको स्वार्थपूर्तिका लागि युवाशक्ति सडकमा उत्रिन तथा आन्दोलनमा मर्न तयार भएका छन् । युवा जनशक्तिलाई सही परिचालन गर्न राज्य सक्षम नभएको यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।
अनि एक दलले अर्को बिरोध अर्को ले अर्को को बिरोध गर्ने दलिय प्रवृत्तिको कारण दलिय अन्तर बिरोधकै कारण मुलुकमा राजनीति अस्थिर उत्पन्न हुदा अर्काथरी युवा सामाजिक अभियन्ताको नाममा सडकमा अनुत्पादक कार्यका लागि लामबद्ध भएर उभिएका छन् । राज्य र राजनीतिक दलको कमीकमजोरीलाई देखाउँदै थप युवालाई सडकमा बरालिन निमन्त्रणा गरिरहेका छन् । यसको न त कुनै गन्तव्य छ नत कुनै बिन्दु छ । यसबाट न समाज रूपान्तरणका लागि कुनै योगदान नै पुग्नेछ ।
कतिपय युवा रोजगारीको अभावमा मानसिक तनाव र आपराधिक क्रियाकलापमा समेत संलग्न भइरहेका छन् । वास्तवमै भन्ने हो भने मुलुकमा युवा उद्यमीको सङ्ख्या शून्य छन् भन्दा फरक नहोला । जबसम्म ऊर्जाशील र उत्पादनशील युवा जनशक्तिलाई देश विकास र समाज रूपान्तरणको कार्यमा समावेश गर्न सकिँदैन, तबसम्म युवा दिवस मनाउनुको कुनै औचित्य पुष्टि हुँदैन ।